Sida loo waafajiyo Apple Watch-kii hore iyo iPhone cusub | Wararka IPhone
Sida loo waafajiyo Apple Watch-kii hore iyo iPhone cusub
IPhone cusub, dhibaatooyin cusub iyo goobo cusub. Inbadan oo idinka mid ah waxay doorteen inay iibsadaan iPhone 7 qaabkiisa caadiga ah ama midka Dheeriga ah, si kastaba ha noqotee, Apple Watch Series 1 iyo Series 2 ma aysan tijaabin jeebkaaga. Hadda waxaa la joogaa waqtigii laga jari lahaa Apple Watch si loogu xiro aaladda cusub ee iOS, mana ahan wax fudud sida ay umuuqato. Taasi waa sababta maanta aan rabno inaan kuu soo qaadno a cashar ku saabsan sida loo waafajiyo Apple Watch-kii hore iyo iPhone cusub, maxaa yeelay iPhone-ka maanta waxaan jecel nahay inaan wax kuugu fududeyno, qaasatan xilliyada dhibaatada sida ka beddelka mid ka mid ah iPhone-ka oo loo beddelo mid kale.
1 Tallaabooyinkii hore: Kaabista iyo ka saar Apple Watch
2 Ku xidho Apple Watch qalabkaaga cusub
Tallaabooyinkii hore: Kaabista iyo ka saar Apple Watch
Waxaan qaadi doonaa tallaabooyin taxaddar leh mashruuc kasta oo noocan ah. Marka ugu horeysa waxaan ufureynaa barnaamijka Apple Watch barnaamijkeena iPhone si aan uhesho qeybta Mi Ilaaliya oo dooro ikhtiyaarka noo oggolaan doona inaan kala-baxno Apple Watch isla markiiba. Hadda waxaan kaliya u baahan doonnaa inaan ku xaqiijino ficilka adoo galaya Aqoonsigeenna Apple.
Haddii aynaan rabin inay lumiso xogta Apple Watch waa inaan nuqul nuqul ah ka sameysanno iPhone-keena ku yaal iCloud, tan had iyo jeer, waxaan aadi doonnaa Dejinta> iCloud> Kaabta. IPhone-ka cusub waa inaan dib u soo celino kaydka la sheegay. Waxaan sidoo kale ku sameyn karnaa iTunes, hab aan doorbidayo xasilloonidiisa.
Ku xidho Apple Watch qalabkaaga cusub
Waxba waayi meyno haddii aan dib u soo celinnay keydkii, waa wax maskaxda lagu hayo. Ugu horreyntii waxaan gujin doonnaa barnaamijka Apple Watch ee iOS 10, isla marka aan furnona wuxuu na weydiin doonaa inaan lammaaneyno Apple Watch. Aan sugno xaqiijinta xogta dhamaadka shaashadda animation. IPhone-ka waxaan ku dooran doonaa ikhtiyaarka «Soo celinta kaydinta»Waxaanuna raacaynaa tillaabooyinka lagu muujiyey shaashadda.
Sidoo kale, casharradan ayuu tilmaamayaa saaxiibkeen Luis Padilla sida loo badbaadiyo xogta Caafimaadka iyo Waxqabadka si loogu celiyo iPhone cusub. Ha moogaanin macluumaadkaan khuseeya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Casharrada iyo buugaagta » Sida loo waafajiyo Apple Watch-kii hore iyo iPhone cusub
Google ayaa soo bandhigi doonta taleefannadeeda casriga ah 4-ta bisha Oktoobar
La ogaaday farsamada qarsoon ee adabtarada hillaaca cusub ee 3.5mm minijack